Uvavanyo kunye nokuvavanywa- iPandawill Technology Co, Ltd.
Umgangatho obalaseleyo, ukuthembeka kwemveliso kunye nokusebenza kwemveliso yakho kubalulekile ukuze wandise ixabiso lebrendi kunye nesabelo sakho sentengiso. IPandawill izinikele ngokupheleleyo ekunikezeleni ngokugqwesa kobugcisa kunye nomgangatho ophezulu wenkonzo ngaphakathi kwindibano ye-elektroniki. Injongo yethu kukuvelisa nokuhambisa iimveliso ezingenasiphako.
Inkqubo yethu yoLawulo esemgangathweni elandelwa luthotho lweenkqubo, iinkqubo kunye nokuhamba komsebenzi, yinxalenye edibeneyo kwaye igxininiswe ngamandla kwimisebenzi yethu, eyaziwayo kubo bonke abasebenzi bethu. Kwip pandawill, siqaqambisa ukubaluleka kokupheliswa kwenkunkuma, kunye neendlela ezingafunekiyo zokuvelisa, ukuvumela ukusebenza ngokukuko, kwaye okona kubaluleke kakhulu, inkqubo yokuvelisa ethembekileyo nenolwazi.
Ukuphunyezwa kwe-ISO9001: 2008 kunye ne-ISO14001: izatifikethi zika-2004, sizimisele ukugcina nokuphucula imisebenzi yethu ngokuhambelana nezona ndlela zintle zeshishini.
Kwipandawill, siphumeza amanqanaba aliqela okuhlola kwimveliso yethu ephumayo. Ukuqala kwizinto ezingenayo kunye nokuphela ekupakisheni imveliso yokugqibela. Sine-solder yokuncamathisela uhlolo lokuprinta, ukubekwa kweposi, ukuhanjiswa kwangaphambili, iinkqubo zokuhlola zeNqaku lokuQala kunye nokuHlola okuSebenzayo okuzenzekelayo. (AOI) Ukusuka apho bajongwa phantsi kwemicroscope ngaphambi kokuya kwinkqubo elandelayo. kwaye ekugqibeleni sigqibele kwisebe lethu loLawulo loMgangatho apho sineminyaka yamava kwaye kuphela ngabahloli be-QC abafanelekileyo.
Ukuhlolwa kunye nokuvavanywa kubandakanya:
✓ Uvavanyo lweMigangatho esisiseko: uhlolo olubonakalayo.
✓ Ukuhlolwa kwe-X-ray: kuvavanyo lwee-BGAs, ii-QFN kunye neePCB ezingenanto.
✓ Ukutshekishwa kwe-AOI: iimvavanyo zokuncamathisela i-solder, izinto ezingama-0201, izinto ezingekhoyo kunye nepolarity
✓ Uvavanyo lweSekethe: uvavanyo olusebenzayo kuluhlu olubanzi lwendibano kunye neziphene zecandelo.
✓ Uvavanyo olusebenzayo: ngokweenkqubo zovavanyo loMthengi.